Rodrigo Duterte (Tagalog : Rodrigo Duterte)
Rodrigo Roa Duterte (Tagalog: [rodɾigo dʊtɛrtɛ]; dhashay March 28, 1945), oo sidoo kale loo yaqaano Digong iyo Rody,  waa siyaasi Filipiin ah oo ah madaxweynaha 16aad iyo kan hadda ee Filibiin iyo kan ugu horreeya ee Mindanao, koonfurta ugu sarreysa jasiiradda waaweyn ee dalka, si ay u qabtaan xafiiska.     Waxa uu yahay guddoomiyaha xisbiga PDP-Laban. Xafiiska xafiiska 71-aad ee bisha June 2016-ka, Duterte waa qofka ugu da'da weyn ee u tartamaya madaxweynaha Filibiin; Rikoorka waxaa hore u qabtay Sergio Osmeña da'da 65 jir. 
Duterte wuxuu cilmiga siyaasadda ka bartay Jaamacadda Filibiin, oo ka qalinjabisay 1968-ka, ka hor inta uusan helin shahaadada sharciga ee San Beda College of Law ee 1972-kii. Kadib wuxuu ka shaqeynayay garyaqaan wuxuuna u ahaa xeer ilaaliye Davao City, magaalo wayn oo Mindanao jasiiradda, ka hor inta uusan noqon duqa magaalada, kadibna duqa magaalada ka dib soo ifbaxay filimkiisii ​​Filibiin ee 1986. Duterte wuxuu ka mid ahaa badhasaabka ugu adeega Filibiin, isaga oo adeegaya todobo shuruudood iyo in ka badan 22 sano.
Soomaliya waxaa si weyn loogu sharraxay sida dadweynaha (11)       Duterte ayaa guuleystay siyaasadda oo uu taageero u fidiyay dilka aan sharciga waafaqsaneyn ee dadka isticmaala daroogada iyo dambiilayaasha kale. ] Kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa diiwaan galiyay in ka badan 1,400 dilal ah oo lagu soo eedeeyay kooxo dhimasho oo ka shaqeynayay Davao intii u dhaxaysay 1998 iyo May 2016; dhibanayaasha ayaa ahaa badi dadka isticmaala daroogada, dembiilayaasha yaryar iyo carruurta waddooyinka ah.  Warbixin ay soo saartay Guddiga Filibiin ee Xuquuqda Aadanaha ayaa xaqiijiyay "dhaqanka nidaamsan ee dilalka aan sharciga waafaqsaneyn" ee ay qabaan Kooxda Dhimashada Davao.   Duterte ayaa si bareer ah u xaqiijiyay oo beeniyay inuu ku lug lahaa.  Xafiiska Ombudsman ayaa xiray baaritaan bishii Janaayo 2016 isagoo sheegay in aysan helin wax caddayn ah in Dhadhaab Dhimashada Davao ay jirto, mana jirto wax caddayn ah oo lagu xirayo booliiska ama Duterte dilka.  Kiiska ayaa tan iyo markii dib loo furay.  Duterte ayaa si joogta ah u xaqiijiyay in uu si shakhsi ah u dilay saddex tuhmane oo afduub loo geystay koontarool booliis halka Duqa magaalada Davao 1988-kii.
Maajo 9, 2016, Duterte wuxuu ku guuleystay doorashadii madaxweynenimo ee Filibiin iyada oo 39.01% codadka, ka adkaatay afar musharax oo kale, kuwaas oo kala ah Mar Roxas  Xisbiga Liberal (23.4%), Senator Grace Poe (21.6%), Jejromar Binay oo ka tirsan Isbahaysiga Qaranka ee Qaranka (12.9%), iyo Senator Miriam Defensor oo ka tirsan Xisbiga Dibuhabaynta Dadka (3%).  Intii lagu guda jiray ololahiisa, wuxuu ballan-qaaday in uu yareeynayo dambiyada isagoo diley tobanaan kun oo denbiilayaal ah  Siyaasaddiisa gudaha waxay diiradda saareysaa la dagaallanka ganacsiga daroogada sharci darada ah iyada oo la bilaabayo Dagaalka Dagaalka ee Filibiin. Sida laga soo xigtay Bilayska Qaranka ee Filibiin dhimashada wadarta guud waxay gaartay 7,000 bishii Janaayo 2017, ka dib markii booliisku joojiyeen xogta daabacaadda  Kadib dhaleeceyn ka timid khubarada xuquuqda aadanaha ee Qaramada Midoobey, in dilalka aan sharciga waafaqsaneyn ay korodheen tan iyo doorashadiisa, D
Bishii Oktoobar 2021, Rodrigo Duterte wuxuu ku dhawaaqay inuusan u tartameyn jagada madaxweyne ku-xigeenka 2022-ka oo uu ka fariisan doono nolosha siyaasadda.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Rodrigo_Duterte&oldid=218027"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 2 Oktoobar 2021, marka ee eheed 17:58.